अब राजधानीका यी ६ स्थानमा फ्रि–वाइफाई
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यककाका बिभिन्न ६ स्थानहरुमा निःशुल्क वाइफाई उपलब्ध गराउने गरि कार्य अगाडि बढेको छ । वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच निःशुल्क वाइफाईको सम्झौता भएको हो । सम्झौता अनुसार अबको २ महिनाभित्र राजधानीका पशुपतीनाथ, बौद्ध, शंखपार्क, बालाजु बाइसधारा उद्यान, स्वयम्भु र बसन्तपुर हनुमान ढोका क्षेत्रमा वाइफाई सेवा सुरु हुने छ । हालको लागि ६ स्थानमा मात्रै निशुल्क सेवा दिने भए पनि उक्त सेवा वृद्धि गर्दै जाने काठमाडौं महानगरको योजना रहेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा अश्लील सामग्री प्रमुख समस्या
बिल गेट्सबारे अजबगजबका कुराहरु
यसकारण पार्टनरले ‘न्युड सेल्फी’माग्छन् !
सायद तपाईलाई यो खबर थोरै अचम्मको लाग्न सक्छ तर यसको वास्तविकता थाहा पाएपछि तपाई स्तब्ध हुनु हुनेछ ।
बिल गेट्स भन्ने वित्तिकै हामीलाई उनी संसारकै धनि मानिस हुन भन्ने कुराको याद भइहाल्छ । उनले संसारकै एक सफल कम्पनी मानिने माइक्रोसफ्ट कम्पनीको स्थापना गरेको कुरा पनि धेरैलाई थाहा छ ।
बेइजिङ । चीनमा सामाजिक सञ्जालमा देखिने अश्लील सामग्रीहरू समस्याको रूपमा देखापरेको छ ।
युवा वर्गलाई लक्षित गरेर हुवावेका दुई फोन सार्वजनिक
काठमाडौं । चिनिया फोन निर्माता कम्पनी हुवावेले वाइ सिरिजका दुई फोन बजारमा ल्याएको छ। हुवावेले २०१८ संस्करणका ‘वाई नाइन’ र ‘वाइ सेभेन प्रो’ सार्वजनिक गरेको हो । फोन सार्वजनिक गर्दै हुवावेका कन्ट्री निर्देशक जोयस झुले युवा वर्गलाई लक्षित गरेर मध्यम रेन्जमा चार क्यामरा, सुन्दर फुलभ्यु डिस्प्ले र एआर लेन्स भएको उत्कृष्ट फोन ल्याइएको बताए।
भारतीय रक्षा मन्त्रायको वेभसाइट अवरुद्ध
नयाँदिल्ली । भारतको रक्षा मन्त्रालयको आधिकारिक वेभसाइट ह्याक (अवरुद्ध) भएको छ ।
'८ करोडभन्दा बढी फेसबुक प्रयोगकर्ताका विवरण दुरुपयोग'
बिबिसी । केम्ब्रिज एनालिटिका नामक राजनीतिक परामर्शदातृ संस्थाले पहिला सोचिए भन्दा निकै बढी अर्थात् ८ करोड ७० लाख प्रयोगकर्ताका विवरण लिएको फेसबुकको भनाइ छ।
युट्युब मुख्यालयमा गोली चल्याे, आक्रमणकारीले गरिन् आत्महत्या
बिबिसी । अमेरिकाको उत्तरी क्यालिफोर्नियास्थित युट्युबको मुख्यालयमा तीनजनालाई घाइते बनाउने गरी गोली हान्ने सन्दिग्ध महिलाको मृत्यु भएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ।
यसरी अर्बौ सम्पत्तिको मालिक बने मार्क जुकरबर्ग
एजेन्सी । अमेरिकन अर्वपति मार्क जुगेर्बगको नेटवर्थ करिब ६४.२ बिलियन पाउण्ड रहेको छ । फेसबुक आएपछि उनको विश्वभर चर्चा चुलिएको थियो । फेसबुककै कारण उनले अर्वौ सम्पत्ति जोडिरहेका छन् ।
एउटा यस्तो चस्मा जसले सिसिटिभीलाई मात दिन्छ
एजेन्सी । एउटा अचम्म लाग्दो इन्भेन्सन भएको छ । एउटा यस्तो चस्मा जसले सिसिटिभीलाई पनि मात दिने भएको छ । यो चस्मा लगाएपछि अनुहार देखिदैन ।
'ह्याप्पी बर्थ डे' GMAIL !
काठमाडौं । इन्टरनेटको ठूलो हिस्सा ओगटेको जिमेलका बारेमा तपाईंलाई कत्तिको थाहा छ ? यो कहिले जन्मियो ? सुरुवात कस्तो थियो ? वा यसको नामाकरण कहिले भयो ? यसबारे सबैलाई चासो छ नै ।